San Htun's Diary: မျိုးရိုးထဲမှ ဆိုးပေကြီးများ - ၂
​ပြောလို့ ​ပြောတာ မဟုတ်ဘူး။ သူရှာတဲ့ေ​ငွေကိုပဲ သူ့ကို ​ပေးသုံးခိုင်းပါလား။ အစ်​မတို့မရှိရင်​ လိပ်​တက်​က​နေ ဖွတ်​တက်​ ဖြစ်​သွားနိင်​တယ်​။ လွယ်​လွယ်​​လေး ရ​တော့ ဘ၀အ​ကြောင်းမသိဘူး။
ဟော..ကြည့်..စန်းထွန်းတောင်မနေနုီုင်ဘူး။ ပို့ ပေးချင်နေပြီမဟုတ်လား။
ဒါတွေကို သူတုို့ ကနောကျေပြီးသား။
အမတွေလဲသူ့ဒဏ်တော်တော်ခံရတာဘဲ .့ မြတ်ကြည်လေးပြောသလိုဘဲ သူရှာရတာသူ့ကိုတိုင်းတာပြီးသုံးခိုင်းကြည့်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ စမ်းကြည့်ပါလား
ခြင်္သေ့ကျွှန်းသူကျွှန်းသားတွေက အင်မတန် ဘရန်း၊ လိတ်တက် မက်တယ်။ လိတ်တက်ကိုင်၊ အယ်လ်ဗွီ ကိုင်မှ အထင်ကြီးတယ်။ လူတွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား၊ အကျင့်စရိုက်ထက် ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်က ဘရန်းတွေနဲ့တိုင်းတာတယ်။
အိမ်ကမောင်လေးနာမည်လည်း မောင်မောင်ပဲ ။ သူကတော့ ကိုးတန်းဆိုတော့ ဆိုးမဆိုးမသိရသေးဘူး ဒါပေမယ့် ပူဆာတတ်တာတော့တူတယ်..။ ယောက်ျားလေးတွေတကယ်ဆိုးရင်မိသားစုတွေခံရတယ်နော်...။ အမရယ်..ပစ်သာထားလိုက်...သားကျွေးမှု မယားကျွေးမှုရှိလာရင် ဘရန်းမပြောနဲ့ ပုဆိုး အရောင်မထွက်အောင်လုပ်ကျွေးရမှ အမတွေစေတနာကိုသိမှာ..။
ငယ်စဉ်ဘ၀မှာ မိဘကပေးတာမပေးတာထက် ပူဆာဘို့ အခွင့်အရေးရှိတာ ကျေနပ်စရာ စန်းစန်းရေ...
တီတင့်ဆိုရင် 'ပူဆာတယ်'ဆိုတဲ့စကားကိုတောင် နားမလည်ခဲ့ဘူးဆိုရင် ယုံမလား ? :P
ဘောလုံးပွဲကတော့ တီတင့်ကအစ တအိမ်လုံးကြိုက်စ် :) ဆန္ဒကိုအကောင်ထည်ဖော်နိုင်တဲ့မောင်မောင့် အကြောင်းဖတ်သွားတယ်။